ထိုင်းနိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ အချစ်အတွက် သူပေးထားတဲ့ကတိကို တည်ဖို့အ တွက် သေ ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Sarinya Kamsook နဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူ ကောင်လေးအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Chadil Deffy ဆို့ဟာ ယခုနှစ်ထဲမှာ လက်ထပ်ကြဖို့ အစီအစဉ် ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ။ မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက် Sarinya Kamsook ဆိုသူကောင်မလေးဟာ ကားတိုက် မှုဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ် ။ ဒီလို မင်္ဂလာပွဲမကျင်းပမီ ရက်အနည်းငယ်အလိုမှာပေါ့ ။ Deffy ဟာ သူတို့နဂို ကတိပေးစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း သူ့အချစ်ကို သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် သူမ ( လူသေ ) ကို လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကားတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တုန်းက Sarinya ဟာ အပြင်းအထန်ဒါဏ်ရာတွေရခဲ့တယ် ။ သူမကို အရေးပါ် ကုသမှုတွေနဲ့ အသက်မှီတယ်ဆိုယုံကလေး ကုသပေးနိုင်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေက ပြည့်ကျပ်ညပ်နေတဲ့အရေးပေါ် အခန်းထဲ ကနေ ဆေးရုံကို လွှဲပေးဖို့အတွက် ၆ နာရီလောက်ကြာမြင့်ခဲ့တယ် ။ ဒါဟာလည်း လူဦးရေပြည့် ကျပ်ညပ်နေတဲ့ အရေးပေါ်ကုသခန်းရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူမဟာ ရရှိခဲ့တဲ့ဒါဏ်ရာတွေကြောင့်ပဲ သေဆုံးသွားရရှာပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံ Surin မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ဈာပန မှာ Chadil Duffy ဟာ သူ့ဇနီးလောင်းရဲ့လက်မှာ လက်ထပ် လက်စွပ်ကလေးဝတ်ဆင်ပေးခဲ့တယ် ။ ဒါကြောင့်ဒီပွဲလေးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နာရေး-လက်ထပ်ပွဲ အဖြစ် တင် စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်ရှားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ငါတို့ သေသည်အထိ မခွဲခွာကြဘူး --------။
မူရင်း-A man in Thailand Marriedadead girlfriend to fulfill his promise of love.
29-year old Sarinya Kamsook and her 28-year-old boyfriend, Chadil Deffy, were to be married this year. Sarinya Kamsook unfortunately died inacar crash, just day before the big event, Deffy decided to go on with their wedding as planned and married her.
Sarinya was involved inacar crash, leaving her severely injured. She still could have been saved with timely medical attention. However, the doctors made her wait for6hours due to an overcrowded ICU instead of transferring her to another hospital. During this time, she succumbed to her injuries and passed away.
During her funeral in Surin, Thailand, Chadil Duffy placedaring on his deceased bride’s finger. It thus turned outawedding/funeral ceremony, one of the rare events in the world.
Till death do us apart...
Posted by minthantzaww at 02:07
မြန်မာရက်စွဲနဲ့ အချိန်သိဖို့ ရန်
လှချင်ပါလျှက် . . .(Hirsutism)
ရေထဲမှ Pamplona ကျွဲခတ်ပွဲတော်
ရင်သားအတွင်း ဆီလီကွန် ထည့်ခြင်း
ရင်သွေးအတွက် မိမိကိုယ်ကို ဓါးဖြင့်ဗိုက်ခွဲမွေးခဲ့ေ...
အပျိုစင်အမျိုးသမီး ၁၀၀ ကျော်ကို သတ်ပြီးသွေးနဲ့ရေချ...
ဂြိုလ်သားတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့ အီတလီအမျိုးသမ...
၁၉ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက်တူးပွဲ
မသေသေးတဲ့ ဘဲ သန္ဓေသားတွေကို အရှင်လတ်လတ်ပြုတ်စားခြင်...
✔ မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ပဲ မာနကြီးပါစေ (1)
၇ီဟန်နာ၇ဲ့ အလန်းစာဖက်၇ှင် (1)
android phone မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းပုံနင်တကွ၇ှင်းပြချက် (1)
apple iphone4s (2)
Beautiful korean actresses wearing sexy back dresses (1)
blog ကော်ပီယူလို့မ၇၇င်..ဒီနည်းလေးသုံးလိုက်ပါ (1)
eniglish flash song2(2)
Facebook ပြသာနာအဖြေရှာ (1)
Facebook တွေသုံးတဲ့အခါ ကိုယ် Liked ထားတဲ့ဟာတွေ ဖွက်ထားနည်း (1)
Facebook ပေါ်မှာ ဘယ်လိုငွေရှာမလဲ (1)
Flash Love Songs enaglish အချစ်သချင်းကောင်းလေးတွေပါ (1)
Former Disney star Selena Gomez ditches her good girl image (1)
G-Talk အကောင့်သစ်လေးတစ်ခုရဖို့ (1)
Generation အပျောက်ခံတော့မှာလား မိအေးရယ် (1)
Gmail Account Locked ကျသွားရင် (1)
Google ကနေငွေလွှဲပြောင်းနိူင်ပြီ (1)
Google ရဲ့ နောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှု့အသစ် (1)
gsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည့်ခြင်း (1)
Gtalk Translation အကောင့်တွေပါ… (1)
gtalk မှာ ကိုယ်နားထောင်နေတဲ့ သူချင်းလေးကို ပေါ်နေစေချင (1)
Gtalk မှာ အကောင့်အများကြီးဖွင့်လို့ရအောင်ပြုလုပ်နည်း (1)
Gtalk မှာအမြဲတမ်းidie ဖြစ်ချင်၇င် (1)
Hollywood ၇ဲ့မိခင်များ (1)
Hollywood Siblings Then and Now (24 photos) (1)
how 'bout you (1)
Me. You mad bro? (21pics) (1)
Modern အရူးထကြသူများ (1)
mp3 သချင်းများလိုချင်၇င် (1)
myanmarflashsongs နားဆင်၇န် (1)
New pictures: Selena Gomez's latest fashion styles (1)
Pattern Lock မေ့သွားရင် ပြန်ဖြည်နည်း (1)
Repairing Memory Stick...ပျက်လျှင်ပြင်နည်း (1)
star model တွေ၇ဲ့ sexy ဒီဇိုင်း (1)
Tango Software နဲ့ ဖုန်းအလကားပြောမယ် (1)
The top 20 most-hated celebrities in Hollywood. (1)
Window7ရဲ့ Themeအသစ်လေးပါ (1)
Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀) (1)
windows တင်နည်း ပုံနင်တကွ၇ှင်ပြချက် (1)
You Tube က Video ကိုအလွယ်တကူ ကြည့်ကြမယ် (1)
Youtube ထဲက သီချင်း နှင့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား များကို Blog ထဲ ကူးတင်နည်း (1)
ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အမြင် (2)
ကွန်ပျုတာ မ hang ခင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ (1)
ကွန်ပျူတာ Hangs ရခြင်း (၁၀)ချက် (1)
ကွန်ပျူတာ Passwords မေ့လို့ ဖွင့်လို့မရခဲ့လျှင် (1)
ကွန်ပျူတာ ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်များ (2)
ကွန်ပြူတာကိုမြန်စေမယ့်နည်းလမ်း(၅ )မျိုး (1)
ကာတွန်း ဟာသ (1)
ကိုး၇ီးယားမင်းသမီးတွေ၇ဲ့ ပွဲတက်ဖက်၇ှင် မြန်မာမင်းသမီးတွေအတု မခိုး၇န် (1)
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် application တွေပြန်ဖျတ်မရတော့ရင်တော့ (1)
ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်ပါစေ (1)
ကျန်းမာရေးအတွက် အတိုအထွားများ (6)
ကျမ္မာေ၇းအတွက် သိသင့်တာလေးများ လေလာစ၇ာများ (3)
ခန္ဓာကိုယ် တစ်ပိုင်းပြတ် လူသား (1)
ဂုဏ်သိက္ခာ.. သတ္တိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှု (1)
ဂျပန်မော်ဒယ်လေး၇ဲ့Plastic Surgery to Look Like (1)
ငါးဖမ်းသမားနှင့် သူဌေးကြီး (1)
စကားပြော အတတ်ပညာ (1)
စာအုပ်စင်မှ မိတ်ဆွေတို့ ဖတ်ရှူနိုင်တဲ့ စာအုပ်စာရင်းပေါင်းချုပ်ပါ။ (3)
စိတ်တည်ငြိမ်စေဖို့ နည်းလမ်းများ (1)
ဆရာတော်တွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေပါ (1)
တ၇ုပ် မော်ဒယ်လေး၇ဲ အလှဖက်၇ှင် (1)
တရုတ်ပြည်မတွင် ချမ်းသာသူတို့က လူငှား၍ ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေနိုင် (1)
ဓမ္မဆိုင်၇ာ ဆိုက်များ... (1)
နိုင်ငံခြားနာမည်ကြီးstar တွေအကြောင်းသိချင်၇င် (1)
ပညာရှိ အဆိုအမိန်လေးများ (1)
ဖတ်ခဲ့ဘူးသော အချစ်စာမျက်နှာများ(၂) (1)
ဖိုင်ဆိုက် 100 MB အထိ ပို့လို့ရပါတယ် (1)
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမစာများ (8)
ဘာလို့များကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်ရသလဲ ညီမငယ် (1)
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲ လှမ်းဝင်ဖို့ရာ (1)
မိန်းကလေးများ စိတ်ဝင်စားနိုင်ဖွယ် ရှိသော ယောင်္ကျားများ (1)
မိန်းကလေးများအားလုံး အသိတရားလေးနဲ့ သတိထားကြပါ။ (1)
မိန်းကလေးအတွက် ဘဝဒဿန (1)
မိန်းမမရသင့်သော ယောကျာင်္းတွေ (1)
မိမိ Facebook Wall ပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ စာမရေး/ပုံမတင်နိုင်အောင်လုပ်မယ် (1)
မိမိတို့ ရဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ပြန်လည်တင်ပြ မျှဝေဖို့ နဲ့ဘလော့မှာ တင်နည်း (2)
ဂြိုလ်သားတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့ အီတလီအမျိုးသမီး (1)
မြန်မာပြည်ကဖွင့်လို့၇တဲ့ဆိုက်ပါ ဖိုင်တင်ချင်၇င် (1)
မြန်မာအမျိုးသား ၂ ဦး၏ လက်ထပ်ပွဲ ဟု ယူဆရသည့် (1)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး၊ အဟော့ဆုံး အတွင်းခံဝတ် ပြပွဲကြီးမှ ဓာတ်ပုံများ (1)
ရက်ရွေးချယ်၍ ဓမ္မတာသွေးပေါ်စေခြင်း (1)
ရင်သားအတွင်း ဆီလီကွန် ထည့်ခြင်း (1)
ရုရှားနိုင်ငံမှ ခန္ဓာကိုယ်အပျော့ပျောင်းဆုံးမိန်းကလေး (1)
ရဲတိုက်နဲ့ ချစ်သုဝေကို မီဒီယာများက ချီးကျူး (1)
လူ ၈ ယောက်ရဲ့ အသက်ကယ်ခဲ့တဲ့ အလှူရှင်မလေး (1)
ဝမ်းချုပ်နေစဉ် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်သော အစားအစာများ (1)
သင်ဘယ်တော့မှ မမြင်ဖူးသော မြင်ကွင်းတစ်ခု (1)
သင်္ကြန် အကြောင်းများ (1)
သမိုင်းတလျှောက် အရပ်အရှည်ဆုံးအမျိုးသမီးများ (1)
အချစ်မှာမှတ်ထားရမဲ့ (၂၅) ချက် (1)
အချစ်အတွက် မိမိကိုယ်မိမိ မီးရှို့သူ (1)
အတူတူမအိပ်သင့်သော အရာများ (1)
အထီးလေးက အမကနေ ပြောင်းလာသူ၊ အမလေးက အထီးကနေ ပြောင်းလာသူ (1)
အနာဂတ် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို ရိုဘော့များ သိမ်းပိုက်မည် (1)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက်တူးပွဲ (1)
အမှိုက် အကြောင်း (1)
အမျိုးသမီး ကာယဗလမယ် (1)
အမျိုးသမီးတစ်ထောင်ကျော်အား အဓမ္မပြုကျင့်သူ ဖမ်းဆီးခံရ (1)
အမျိုးသားသုတ်ရည် တစ်ခါလှူလျှင် ၇၅ ဒေါ်လာ (1)
အမျိုးသားတွေသိဖို့ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း (1)
အွန်လိုင်းကနေ အဖော်ရှာ လိမ်လည်သူကို မိပြီ (1)
အလွန်လန်း sexy korea မလေးများ (1)
အသုံးဝင်သော ၀က်ဆိုဒ်များပါ (6)
အားဖြည့်အချိုရည်နှင့်အရက် တွဲဖက်သောက်ခြင်းက ဆိုးကျိုးပိုများ (1)
အဖေနဲ့ သမီးပြန်ယူပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် (1)
အမေ သို့ မဟုတ် မြင်တွေ့ နိုင်သော ဘုရား (1)
အမေနေ့ အမှတ်တရ အတွေးစုများ - (1)
အန္တရယ်လွယ်မထားနိုင်တော့ လို့ . (1)
ဥေ၇ာပဘောလုံးပွဲတွေကြည့်၇န် LIVE (1)
ဆော့်ဝဲလ်တွေ install လုပ်ရင်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် ။ (1)
တောက်ပသော ladyboys များ (1)
တောင်ကိုရီးယားမှ အနမ်းပွဲတော် (1)
ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။ ဆိုက် foodball (2)
ရေသန့် ဘူး နဲ့အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးသတိပြုရမည့် အချက်" (1)
သောင်းပြောင်းထွေလာ ဆေးပညာ (2)
အောင်မြင်သူနှင့် ကျရှုံးသူ (1)
နိုင်ငံခြားသားခံယူခြင်းနှင့် မျိုးချစ်စိတ်ပြဿ (1)
" အချစ် " ဆိုတာ လူ့ဘ၀ထဲမှာ မရှိမဖြစ်
အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပင်ရေးသားနေကြသော သင်္ကြန် အကြော...
Facebook ကို အသုံး​ချကာ က​လေး​ငယ်များ​အား​ လိင်​ပိ.
myanmarflashsongs နားဆင်၇န် ဒီမှာတော်တော်စုံပါတယ်...
Flash Love Songs enaglish အချစ်သချင်းကောင်းလေးတွေပ
အမေများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုခြင်း လောကမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးမေ...
၂၀၀၉ သင်္ကြန်ရေ. ပုံလေးများ..အမှတ်တ၇
ီ သင်္ကြန်ရဲ့ ရသတချို့ ပုံလေးတွေပါ
အချစ်မှာမှတ်ထားရမဲ့ (၂၅) ချက်
အောင်မြင်မှု တံခါးကို ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင် သည့် လျှို...
ငါး​များ​ဖြင့်​ ​ခြေ​ထောက်ပြုပြင်ခြင်း​​ကြောင့်​ H...
ပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်နှင့် အာဟာရ ............
ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာ အသက်ထက် တန်ဘိုးကြီးသည်
လူတိုင်း ကြုံရနိုင်တဲ့ သက်လတ်ပိုင်း စိတ်ဂယက် (Mid-...
အာရှသားတွေ ဘာကြောင့် လက်မထပ်သလဲ၊ အပျိုကြီးလုပ်တာ ရ...
နာဇီခေါင်းဆောင် ဟစ်တလာ သတ်သေသွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟုဆို..
ထရပ်ကားဖြင့် တိုက်မိသည့် ကလေးငယ်အား ဆေးကုသစရိတ် မေ...
မိန်း​​မ​​ချောများ​​၏ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံများ​​ ကြည့်​​ရ...
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ချစ်ခင်လာဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
သင့် အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းနည်း
အောင်မြင်မှုရရန်အတွက် အတားအဆီးမှန်သမျှကို ကျော်လွှာ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စမတ်ကျအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ
ဘ၀ရဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ပြောင်းလဲဖို့ မေးခွန်း(၃)ခု
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးတက်စေဖို့
သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို သွားရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ သော့ချက...
အလုပ်များလှတဲ့တစ်နေ့တာမှာ သင့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိ...
အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲ
အချိန် စီမံခန့်ခွဲမှု (Time Management)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ကျော်လွှားခြင်း
သင့်ဘ၀ရဲ့ အိပ်မက်ကို တွေ့ရှိဖို့
အမိမြန်မာနိုင်ငံသားသမီးများ Culture ထိန်းသိမ်းရေး ...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်...78 ချက်ထဲက ဘယ်န...
ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့၇ဲ့ မင်္ဂလာအမှတ်တ၇ပံ...
ဆိုးတော့ဆိုးပါ... သို့သော်.... မမိုက်မဲနှင့်
မိန်းမကောင်းအင်္ဂါ (၆၄) ရပ်
ဒီလို အမေမျိုးလည်း ရှိတယ်
အံ့သြဖွယ်ရာ တိရစ္ဆာန် သန္ဓေသားလောင်းများ
သင်ဘယ်တော့မှ မမြင်ဖူးသော မြင်ကွင်းတစ်ခု
ရေကို အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး
Another amazing weight loss story. From cutie to s...
Hollywood Siblings Then and Now (24 photos)
Selena Gomez 'Havingalot of fun' since Justin Bi...
Beautiful korean actresses wearing sexy back dress...
ကိုး၇ီးယားမင်းသမီးတွေ၇ဲ့ ပွဲတက်ဖက်၇ှင် မြန်မာမင်...
New pictures: Selena Gomez's latest fashion styles...
23 more crazy funny pictures of insane internet #2...
The main reason why I like going to festivals
Iraq veteran who lost face and hands, finds
Embarrassing moments of celebrities
29 Awesome Photos Bring You Back to the Good Old T...
Emma Watson finally shows off killer body on GQ ma...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး၊ အဟော့ဆုံး အတွင်းခံဝတ် ပြပွ...
အိပ်ရာထဲတွင် မြန်ဆန်စွာ အိပ်မောကျစေမည့် နည်းခြောက်...
ကျမ္မာေ၇းအတွက် သိသင့်တာလေးများ လေလာစ၇ာများ
ဘလော့ဂါများရဲ့ပို့စ်များ အတူတူ လင့်ချိတ်ဖို့
Download များ http://download.cnet.com/windows/do...
Flash Love Songs enaglish အချစ်သချင်းလေးတွေနားထောင...
ဘောလုံးပွဲ hightlight ကြည့်ချင်၇င်
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများ
ကျော်နိုင် ခွနိုင်ဖို့ ဝက်ဆိုက် တွေပါ
Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)
Gtalk Translation အကောင့်တွေပါ…
ဘလော့ဂါ templates များလိုချင်၇င်
Gtalk မှာ အကောင့်အများကြီးဖွင့်လို့ရအောင်ပြုလုပ်နည..
ကွန်ပျုတာ မ hang ခင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ဆော့်ဝဲလ်တွေ install လုပ်ရင်အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ် ။
Information ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အ...
Windows7Personalize ပြဿနာ
Gtalk&Gmail အကောင့် password များ မေ့နေလျှင်(သို့)...
သင့်အကောင့် ban ခံရလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား !!!!
Default ကိုယ့် Gmail ကို သူများဝင်သုံးနေလားဆိုပြီး...
Repairing Memory Stick...ပျက်လျှင်ပြင်နည်း
gsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည...
WinX DVD Ripper Platinum 6.3 နှင့် AVG An...
IcoFX v2.0.1 ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက်
ဖိုင်ဆိုက် 100 MB အထိ ပို့လို့ရပါတယ်
Gmail Password အကြောင်း
ကိုယ်ဖတ်နေတဲ. Website စာမျက်နှာကို PDF file အဖြစ်သ...
Desktop ပေါ်တွင် Sleep Command Shortcut Key ကို ဖန်...
နောင်လတ်(မန်း) RUN ရဲ့ History များ ဖျက်ခြင်း
Run Box အတွက် Commend Key များ
Mozilla Firefox နဲ့ ခိုးမယ် ၀ှတ်မယ် သိမ်းမယ် ပြင်မ...
ကိုယ် online မှာ မရှိတဲ့ အချိန် ကိုယ့် G mail ဆီကိ...
Gmail အကောင့်ထဲကို ကိုယ်လက်မခံချင်သူရဲ့  Mail တွေေ...
android phone မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းပုံနင်တကွ၇ှင်းပြ...
windows တင်နည်း ပုံနင်တကွ၇ှင်ပြချက်
၀ိညာဉ်သစ် စာအုပ်စင်မှ မိတ်ဆွေတို့ ဖတ်ရှူနိုင်တဲ့ စ...
လေ့လာမှတ်သား အချစ်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး စာအုပ်များ
Download ရယူနိုင်သော စာအုပ်များအစုံ၇ှိပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာသာ ရောက်မလာခဲ့ရင်။
" ဘ၀မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ "ဆရာတော်ဦးဇောတိက၏...
ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း (ပုံနှင့်တကွရှင်းလင်းချက်)
မေတ္တာဆန်ရေ ( စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဓလေ့ဆိ...
ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူ အဟောင်း ၊ အခြားတ၇ားစာပေများ
ဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန...
လူတကာ့လူ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
**ဘုရား ကို အမှန်တကယ် ပူဇော်နိုင် ကြပါစေ****
" />" />" src="" title=""/>
အဖြူေ၇ာင်လေးကိုလည်းဆေးမဆိုးနဲ့ အေ၇ာင်ပျယ်လွင့်အောင်လည်းမင်းမလုပ်နဲ့ အဖြူေ၇ာင်လေး၇ဲ့အတိုင်းပဲထားကွယ် သူငယ်ချင်း၇ယ်.............
Copyright 2010 - minthantzaww - Powered by Blogger